सपना, पोल्यान्ड र दिल्ली - युवा मन - प्रकाशितः जेष्ठ ३, २०७५ - साप्ताहिक
निद हराएको थियो सबैका आँखाबाट, धेरै पर देखिने इन्द्रेणी सपनाले चोरेको थियो सबैको निद । देशमा गर्न खोज्नेहरू तर असफल भएका केही पात्रहरू जसलाई फेसबुकमा जोडेँ, यात्रासँगै मन मिलेकाले, विचार मिलेकाले । रात छिप्पिँदै थियो, मनमा तिक्तता बढ्दै थियो । विदेश जाने भिसा लगाउन पनि विदेश नै पुग्नुपर्ने ? यो कस्तो नियति हाम्रो पुस्ताको ? साँच्चिकै नेपाल रित्तिँदैछ, युवाविहीन हुँदैछ ? मनमा अनुत्तरित प्रश्न उठिरहे । रात–बिहान अनि दिन हुँदै साँझ ५ बजे मज्नुकाटिला पुगियो । ३२ घण्टे बसको यात्रा टुंगियो । एउटा परिवार छुटेर छिन्नभिन्न भएको आभास भयो । सबैको सफलताको कामना गर्दै म अटो चढेर मेट्रो स्टेसनतर्फ लागेँ ।